सहाराको स्वास्थ्य शिविर | सहकारी | साझामन्च
सहाराको स्वास्थ्य शिविर
साझामञ्च, प्रकाशित मिति : २०७४ ,माघ , २० 15:36:00
चारपाने । सहारा नेपाल साकोस स्वास्थ्य उपसमितिको आयोजनामा झापाको लक्ष्मीपुरमा एकदिने स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ ।
शिविरमा २०० जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो भने १२५ जनालाई मधुमेह तथा ब्लड प्रेसरको औषधि निःशुल्क प्रदान गरिएको थियो ।
सहारा नेपालका जीवन बरदान कार्यक्रमका संयोजक भक्तबहादुर खड्काका अनुसार स्वास्थ्य शिविरमा लक्ष्मीपुर सेवा केन्द्र अन्तर्गतका शेयर सदस्य तथा अन्यको सहभागिता रहेको थियो ।
लक्ष्मीपुर सेवा केन्द्र सञ्चालन समितिका संयोजक केदार शमशेर गिरीको अध्यक्षतामा भएको स्वास्थ्य शिशिरमा डा. प्रमोद साह र डा. दुर्योधन यादवले स्वास्थ्य परीक्षण गरेको सहारा नेपाल साकोसका सञ्चालक समिति सदस्य शुक्रबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रममा म्याग्नुस कम्पनीले औषधि सहयोग गरेको स्वास्थ्य उपसमिति संयोजक नरेन्द्र बरालले बताए । स्वास्थ्य शिविरमा उपसमिति सदस्यहरु सुरेन्द्र प्रधान र कृष्ण गिरीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।